Godina Shawaa Lixaa Aanaa Caalliyaa Geedoottii Sababaa FDG daran jabaatee itti Fufeen Barsiisonni Oromoo ta’an Hidhamaa Jiru | QEERROO
Godina Shawaa Lixaa Aanaa Caalliyaa Geedoottii Sababaa FDG daran jabaatee itti Fufeen Barsiisonni Oromoo ta’an Hidhamaa Jiru
Posted on March 23, 2013 by Qeerroo
Bitootessa 22,2013 Amboo
Mootmaan wayyaanees diddaa goototni baratootni Oromoo mana barumsaa Geedoo sadarkaa 2ffaa gaggeessaa jiranitti rifachuun sabbontotaa barsiisotaa ilmaan Oromoo ta’aan FDG baratootni gaggeessaa jiran keessaa qooda qabduu jechuun barsiistotaa dorsiisaa jiraachuun gabaafame jira.
Haala kanaan Bitootessa 20,2013 galgala barsiisaan Afaan Oromoo Barsiisaa Biraanuu Dirribsaa Barsiisaa M/B Geedoo sadrkaa 2ffaa fi Qophaa’inaa kan ta’ee humnotaa poolisaa fi tikaa Wayyaaneetiin ukkaaffaamee essaa buuteen isaa dhabamuun gabaafamee jira. Gototni baratootni Oromoo M/B Geedoo sadarkaa 2ffaa fi qophaa’inaa guyyaa har’aa hanga barsiisaa
Biraanuu Dirribsaa barsiisaan keenyaa fi baratootni Oromoo hidhaman hiikamanitti barnotaa dhaabnee FDG jabbeessinee kan itti fufnu ta’aa jechuun beeksifatanii diddaan baratoota mana barumsaa Geedoo jabaatee itti fufee jiraachuu maddeen keenya gabaasaniru.
Kana malees barattooti Oromoo barataa Tolaa Baqqaalaa fi Barataa Masarat Abarraa jedhamaan diddaa baratootaa Oromoo M/B Geedoo kakastanii isiin ABO dha jechuun qabamanii bakka buuteen isaanii him beekamne.
Bitootessaa 16,2013 Godina wallaaggaa bahaa Onaa Limmuu Galiilaattii sabboonaa Oromoo fi qabsaayaa kan ture Barsiisaa Kabbadee Galataa Jooduu, sababa dhukkuba laphee yeroo dheeraa dhukubsachaa turanif, dhukkubni isaanii itti jabaachuun du’aan Addunya kana irraa boqotanif gaddaa gudda nutti dhagahama,
Barsiisaa Kabbadee Galataa Jooduu Onaa Limmuu Galiilaa bakka Loobicaa jedhamutti dhalatan umriin isaanii gannaa 50 kan ta’ee fi abbaa ijoollee 14 ti. sadarkaa barnotaan University Jimmaa irraa digrii jalqabaa nama qaban yeroo ta’uu, hojii barsiisummaa keessaa bara dheeraa tajajilaa kan turan fi yeroo amma kana illee koolleejjii teekinikaa fi ogummaa Onaa Limmuu Galiilaa utuu barsiisaa jirani boqotan. Dhukkuba laphee qabaniif itti jabaachuun du’aan boqochuu isaaniif barattoota Oromoo fi qabsaawota Oromoo naannicha jiranitti gaddaa guddaatu nutti dhaga’amee jiraachuu qeerroon naannicha irraa nuu dhaamneen beeksise.Maatii,fi firoottaan Barsiisaa Kabbadee Galataa Jooduu fi Ijoollee isaanif Waaqayyoo jajjabinaa haa kennu, ijoollee isanii nama kaayyoo abbaa isaanii galmaan ga’uu jechuu qeerroon dhaamsa dabarsanii jiru.